Barlamaanka somaaliya oo ka hadlay xiisad ka taagan Galgaduud – Radio Daljir
Barlamaanka somaaliya oo ka hadlay xiisad ka taagan Galgaduud
Noofember 12, 2018 1:50 g 0
Golaha Shacabka ee BJFS ayaa maanta baaq nabadeed ka soo saaray colaadda ka taagan gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Balanbale.
Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Shacabka mudane Mahad Cabdalla Cawad oo ku hadlaayay magaca Golaha Shacabka ayaa sheegay in ay ka xun yihiin colaadda ka soo cusboonaatay gobolka Galgaduud.
“Waxaan magaca golaha shacabka baaq ugu soo jeedinayaa shacabka ku dhaqanka gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Balanbale oo ay colaad ka soo cusboonaatay oo dhex martay beelo walaalo ah, waxaan beelahaas usoo jeedineynaa in si deg deg ah nabadda ku qaataan oo ay heshiiyaan”. ayuu yiri guddoomiye Mahad.
Guddoomiye Mahad ayaa xukuumadda Soomaaliya ka codsaday iney xoogga saarto joojinta colaadaas iyo in beelaha walaalaha la heshiisiiyo.
“ waxaan usoo jeedineynaa xukuumadda iyo maamulada kale ee degaankaas ka jira in beelaha dirirtu ka dhaxeyso gurmad deg deg ah loo diro, colaadana la joojiyo”. ayuu mar kale yiri guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Shacabka mudane Mahad Cabdalla Cawad.
Baydhabo Golaha Wasiiradda Koonfur galbeed oo amaro cusub la dul dhigay (Sawiro)
Muuqaalka Bulshada: Waxtarka iyo waxyeelada bulsho ee baraha bulshada (dhegayso)